राप्रपाका एकै जिल्लामा दुइ अध्यक्ष » खबरहरुको एउटै केन्द्र
राप्रपाका एकै जिल्लामा दुइ अध्यक्ष
शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०७:३० मा प्रकाशित !
५ चैत,काभ्रे । एकिरणको महिनादिन नपुग्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटको बाटोमा देखिएको छ । आज भएको जिल्ला कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यको बैठकले उपाध्यक्ष टुल्कु लामालाई अध्यक्ष घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शमसेर राणाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको बैठकले उनलाई अध्यक्ष घोषणा गरेको हो । लामा तत्कालिन पशुपति शमसेर राणा नेतृत्वको राप्रपाका जिल्ला उपाध्यक्ष हुन ।
तत्कालिन राप्रपा नेपालका सांसद समेत रहेका जिल्ला अध्यक्ष रेशम लामा केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित भएपछि पद खाली थियो । राप्रपा विधानमा माथिल्लो पदमा उम्मेदवारी दिए साबिकको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुन लामाले टुल्कु लामालाई उपाध्यक्ष र धनजित लामालाई सचिव बनाउन लिखित सहमति गरेका थिए ।
सहमतिविपरित अध्यक्ष लामाले फागुन ७ गते उपाध्यक्षमा आरजुकुमार केसी, सचिव राजेन्द्र केसी, कोषाध्यक्ष पशुपति कुमार शाह र सहसचिवमा धनजित लामालाई मनोनित गरेका थिए । ५० सदस्यीय कार्यसमितिमा ३४ जना आफ्नो पक्षमा रहेको टुल्कुले दाबी गरे । ४ वटा निवार्चन क्षेत्र मध्ये १ का केशव लामा, २ का चन्द्रबहादुर खड्का, ३ का गोपाल सेढाईले टुल्कुलाई समर्थन गरेका छन । अध्यक्ष घोषणा गरेका लामाले एकलौटी बढ्न खोजेकोले बहुमत सदस्यको बैठकबाट अध्यक्ष चयन भएको बताए । राप्रपा नेपालका तत्कालिन जिल्ला अध्यक्ष रेशम लामा समुहले पनि शनिवार छुट्टै बैठक बोलाएका छन ।
PREVIOUS POST Previous post: ४८१ गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत खटाईयो
NEXT POST Next post: राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको अस्तित्व सङ्कटमा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०७:३०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०७:३०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०७:३०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०७:३०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०७:३०